GPS013D - OMG လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးယာဉ် / ကား Magnetic GPS Tracker - OMG Solutions
GPS013D - OMG လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးယာဉ် / Car Magnetic GPS Tracker
OMGGPS013D ရှိပြီးသားဂျီအက်စ်အမ်ကွန်ယက်နှင့် GPS ဂြိုဟ်တုများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်နေသည့် Spy Hidden Car GPS Tracker သည် SMS, mobile APP နှင့် web tracking software တို့မှမည်သည့်ပစ်မှတ်ကိုမဆိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် GPS, Google Map, Wi-Fi နှင့် LBS dual-positioning ၏အဆင့်မြင့်ဆုံးနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်စွမ်းအားမြင့်သံလိုက်ပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ကား၊ ထရပ်ကားနှင့်သတ္တုမျက်နှာပြင်ပါသောမည်သည့်ပစ်မှတ်ကိုမဆိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် 3G GSM 850/900/1800 / 1900Mhz ကိုထောက်ပံ့သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
GPS ကိုကား tracker ၏ function
စင်္ကာပူ 3G နှင့် 4G sim card ကိုထောကျပံ့
အချိန်နှင့်တပြေးညီ app (IOS & Android)၊ sms နှင့်ဝဘ်ပလက်ဖောင်းတို့ဖြင့်ခြေရာခံခြင်း
Remote Monitoring (သူလျှို - built-in မိုက်ခရိုဖုန်း၊ နောက်ခံစကားပြောဆိုခွင့်ပြုသည်)
Long က standby ဘဝဘက်ထရီ 2-3 သီတင်းပါတ်
ဆဲလ်ဖုန်းမှ google အနေအထား link ကိုအတူ sms ကို Reply
မြန်နှုန်းနှိုးဆော်သံကျော် Geo-ခြံစည်းရိုး, တုန်ခါမှုနှိုးဆော်သံ
Sleeping အာဏာကိုကယ်တင် mode ကို (အလုပ်အဖွဲ့ mode ကို၏3မျိုး)
Build-In5ပါဝါသံလိုက်
WIFI တည်နေရာ (Optional)
နှိုးစက်ဖယ်ရှားပါ (Device ကိုကားကနေဖယ်ရှားပစ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူသတိပေးချက်ပို့ဖြစ်လိမ့်မည်)
စသည်တို့ကိုအပြင်ဘက်ပုဂ္ဂလိကကားများ / ယာဉ်ငှားရမ်း / ပစ္စည်းကိရိယာကိုခြေရာခံ
ကုန်ပစ္စည်းပင်မ Functions များ:
ဂျီပီအက်စ် + ပေါင် Dual-Positioning နည်းလမ်းများ: အ GPS signal ကိုကောင်းလှ၏လျှင်, ကိရိယာမဟုတ်လျှင်, device ကိုပေါင်ကနေတဆင့်နေရာချထားပါလိမ့်မယ်, GPS ဂြိုလ်တုမှတဆင့်နေရာချထားမည်! ဂျီပီအက်စ် mode ကိုတည်နေရာအောက်, တိကျမှန်ကန်မှု 5-10 မီတာဖြစ်ပါသည်, mode ကိုတည်နေရာပေါင်အောက်, တိကျမှန်ကန်မှု 100-2000 မီတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ခြေရာကောက်: သင် mobilephone, တက်ဘလက်နှင့်ကွန်ပျူတာကနေတစ်ဆင့် google မြေပုံပေါ်မှာ device ကိုခြေရာခံ realtime နိုင်ပါတယ်လိမ့်မယ်, နှင့် minumum data တွေကိုအပ်လုဒ်ကိုကြားကာလ 10 စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းလမ်းကြောင်းပြသမှု: အဆိုပါ APP နှင့် web server သို့သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကသမိုင်းလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင်နိုင်ပါတယ်မည်,6လအထိစက်ပစ္စည်း၏အပ်လုဒ်ကိုဒေတာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
ရှည်လျားသောကို standby အချိန်: ဒါဟာ built-in ဖြစ်ပါတယ် 3.7V 20000 mAh ဘက်ထရီ / 10000mAh Li-ion ဘက်ထရီ standby အချိန်သည် 240 / 120 ရက်ပေါင်းမှတက်သည်နှင့်ပြုပြင်အချိန် 20-30 ရက်ပေါင်းအထိရှိ၏
သံလိုက်အစွမ်းထက်: ဒါဟာ built-in ဖြစ်ပါတယ်အစွမ်းထက်သံလိုက်အလွန်လွယ်ကူစွာ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ရေစိုခံ IP67: ဤစက်ပစ္စည်း၏ရေစိုခံအဆင့်ကို IP65 ဖြစ်ပါသည်, ကရေပက်ရေခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပေမယ်ရေအောက်၌ဖုံးထားလို့မရပါ။
အဝေးမှအသံ Monitor: ထို့နောက် device ကိုသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်, ပထမဦးဆုံးစက်ကိုရန် "ု့ကပ်ရေး + Password ကို" ပို့ရန် monitor Mode ကိုသငျသညျ device ကိုအတွက် SIM ကတ်အရေအတွက်မခေါ်စေလျှင်မူကား, ယခုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုကိုတက်ကောက်ပါလိမ့်မယ်သင် device ကိုလှည့်ပတ်စကားသံကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်မည်!
Overspeed နှိုးစက်: ဤသည်နှိုးဆော်သံကိုသာယူနစ်မြန်နှုန်းကမက်ဆေ့ခ်ျကို "မြန်နှုန်းနှိုးဆော်သံ!" ပို့ပေးပါလိမ့်မည် admin ရဲ့အရေအတွက်တိုင်း5မိနစ်, သင် presetted အမြန်နှုန်းထက်ကျော်လွန်နေသည် mode.When စဉ်ဆက်မပြတ် positioning ကိုအောက်မှာအလုပ်လုပ်သည်။
ထိတ်လန့်နှိုးစက်: သင်တုန်လှုပ်နှိုးဆော်သံ setting ကိုပြုလေ၏ပြီးနောက်5မိနစ်စာရေးကိရိယာဖြစ်ခြင်းဟာ tracker တွင်စောင့်ရှောက်ပါ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤ function ကိုစတင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ SMS ကို "အာရုံခံကိရိယာနှိုးဆော်သံ!" ပို့ပေးပါလိမ့်မည် admin ရဲ့အရေအတွက်ကဖို့ယူနစ်အံ့အားသင့်ရသည့်အခါ။
လပ်ြရြားမြနှိုးစက်: ယင်းယူနစ် 10 မိနစ်နေရာတစ်နေရာအတွက်ရွေ့ရှိနေမည်တဲ့အခါ, အသုံးပြုသူ "ပြောင်းရွှေ့ + passord" ဒီ command ကိုအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုနှိုးဆော်သံကို set up နိုငျသညျ, ထို့နောကျအမှု၌ device ကိုကရန် "နှိုးစက် + လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ် Move" နှိုးဆော်သံကို SMS ပေးပို့ပါလိမ့်မယ် 500m ပြောင်းရွှေ့ အဆိုပါလုပ်ပိုင်ခွင့်အရေအတွက်က။
Geo-ခြံစည်းရိုး: ခရိုင်အတွင်း၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကန့်သတ်ဖို့ tracker များအတွက် geofence တက်ထားကြ၏။ ကထဲကသို့မဟုတ်ဤခရိုင်အတွင်းရတတ်သည့်အခါအဆိုပါယူနစ် APP နှင့် web server သို့နှိုးဆော်သံသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ကျဆင်းသွားနှိုးစက်: device ကို၏နောက်ကျောဘက်ခြမ်းတခုတခုအပေါ်မှာဆန့်ကျင်ဖယ်ရှားသော induction အာရုံခံအဲဒီမှာရှိပါတယ်။ ဒီမိုးသော induction အာရုံခံကိရိယာကိုထပ်မဖုံးလျှင်, device ကို "နိုးစက် Loosing!" ပို့ပေးပါလိမ့်မည် admin ရဲ့နံပါတ်နှင့်အရေးပေါ်အရေအတွက်ကို SMS ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပံ့ပိုးမှု PC ကိုခြေရာကောက်ပလက်ဖောင်းနှင့်စမတ်ဖုန်းခြေရာခံခြင်းလျှောက်လွှာ။
Dimension: 120mm x ကို 65mm x ကို 50mm
Network မှ: GSM / GPRS
ဂျီပီအက်စ် chip ကို: UBLOX
ဂျီပီအက်စ် sensitivity ကို: -159dBm
GPS စနစ်တိကျမှန်ကန်မှု: 5m
ပထမဦးစွာ Fix ရန်အချိန်
ပူနွေးတဲ့ status ကို 35s
ပူပြင်းတဲ့ status ကို 1s
မြို့ရိုးကိုအားသွင်း: 110-220V input ကို 5V output ကို
ဘက်ထရီ: နှောပြောင်းလဲ 3.7V 10000m Ah က Li-ion ဘက်ထရီ
အရန်သင့်လုပ်သည်:2ရက်သတ္တပတ်မှ 3
သိုလှောင်ခြင်း Temp + 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှကို C ° -85
စစ်ဆင်ရေး Temp + 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှကို C ° -55
စိုစွတ်ခြင်း Non- ငွေ့ရည်ဖွဲ့ 5% -95%
OMGGPS13D - Magnetic GPS Car Tracker - မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း
OMGGPS13D - သံလိုက် GPS Car Tracker - ဝက်ဘ်အခြေပြု Portal (မြင်ကွင်းအပြည့်ကြည့်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
OMGGPS13D - သံလိုက် GPS Car Tracker Demo
7601 စုစုပေါင်း Views စာ2Views စာယနေ့တွင်